ट्याग: reddit | Martech Zone
आकारले फरक पार्छ कि हामी यसलाई स्वीकार्न चाहान्छौं वा गर्दैनौं। जबकि म यी नेटवर्कहरू मध्ये धेरैमा ठूलो प्रशंसक होइन, मैले मेरा अन्तरक्रियाहरू हेर्दा - सब भन्दा ठूला प्लेटफर्महरू हुन् जहाँ म मेरो धेरैजसो समय खर्च गर्दछु। लोकप्रियता ड्राइभले भाग लिन्छ, र जब म मेरो अवस्थित सामाजिक नेटवर्कमा पुग्न चाहन्छु यो लोकप्रिय प्लेटफर्म हो जहाँ म तिनीहरूमा पुग्न सक्दछु। नोट गर्नुहोस् कि मैले अवस्थित भनें। म ग्राहक वा व्यक्तिलाई बेवास्ता गर्न कहिले पनि सल्लाह दिदिन
एसईओ को साथ सामग्री मार्केटिंग को संयोजन को स्मार्ट तरीका
बुधबार, अप्रिल 23, 2014 बुधबार, अप्रिल 23, 2014 Douglas Karr
Blogmost.com मा मान्छेहरूले यो इन्फोग्राफिक विकास गरे र यसलाई सन् १ 2014 XNUMX Quality मा उच्च गुणस्तर ब्याकलिंक्स निर्माण गर्न सानो ज्ञात तरिकाहरू भने। म निश्चित छु कि मलाई त्यो शीर्षक मनपर्दैन ... मलाई लाग्दैन कि कम्पनीहरूले लि links्कहरू निर्माण गर्नमा केन्द्रित गर्नु पर्छ। साइट रणनीतिहरुमा हाम्रो स्थानीय खोज विशेषज्ञहरु लाई भन्न चाहान्छन् कि नयाँ रणनीतिहरु लाई सक्रिय रूपले निर्माण गर्नु भन्दा लिंक कमाउन आवश्यक पर्दछ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, म विश्वास गर्दछु कि यो इन्फोग्राफिकले टन उपकरण र वितरण साइटहरूको संयोजन गर्दछ जहाँ तपाईं सक्नुहुन्छ
कुन सोशल मिडिया प्लेटफर्मले सब भन्दा बढि बिक्री गर्छ?
बुधबार, मार्च 12, 2014 Douglas Karr
वाह ... सामाजिक मिडियाले कसरी ईकमर्स उद्योगलाई प्रभाव पार्छ भनेर अझ राम्ररी बुझ्न, शिपिफाईले million million करोड सोशल मिडिया भ्रमणबाट विश्लेषण गरिएको डेटाको परिणाम हो जुन 37२ ,529,000, ००० अर्डरहरू छन्। यहाँ उनीहरूले साझा गरेको इन्फोग्राफिकबाट केहि हाइलाइटहरू छन्: शॉपिफाई स्टोरहरूमा सबै सोशल मिडिया भ्रमणको लगभग दुई तिहाइ फेसबुकबाट आउँदछन्। सामाजिक मिडियाबाट सबै अर्डरको औसत% 85% फेसबुकबाट आउँदछ। रेडडिटबाट अर्डरहरू २०१ in मा १152२% बढ्यो। पोलिभोरले उच्च औसत अर्डर उत्पन्न गर्दछ
कसले लि ass्ग धारणा मन पराउछ? म गर्छु ... मँ गर्दछु… प्राय: किनभने ग्रेको बारेमा कुरा गर्ने सबै कुरा, उनीहरूको s० को दशकमा सम्बन्ध विच्छेद भएका मोटा केटाकेटीहरू मेरो जीवनशैलीको साथमा हुन्। म एक सामान्य शिकारी हुँ जब यो किनमेलको कुरा आउँछ ... म चाहन्छु, म पाउँछु, म त्यहाँबाट बाहिर जान्छु। मेरो अनुसन्धान सामान्यतया मैले बक्स खोलेपछि सुरु हुन्छ र मैले केहि किनें जुन मलाई चाहिएको छैन, चाहानुहुन्छ, वा बुझ्ने कुराबाट थाँहा पाउँदछ। म एक्लो बुबा हुँ जो १ with का साथ बाँचिरहेका छौं